पोखरामा पनि अब भारतीय गाडीमाथि रोक
Homeसमाचारपोखरामा पनि अब भारतीय गाडीमाथि रोक
December 25, 2019 Spnews समाचार Comments Off on पोखरामा पनि अब भारतीय गाडीमाथि रोक
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरा आउने भारतीय नम्बर प्लेटका सार्वजनिक बसमाथि रोक लगाएको छ । ट्राफिक व्यवस्थापनको कारण देखाउँदै पोखरा पर्यटन परिषद्कै निवेदनमा गण्डकी प्रदेश सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले पोखरामा भारतीय नम्बर प्लेटका सार्वजनिक बस प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् ।
पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये ४० प्रतिशत पर्यटक भारतीय नै हुन्छन् । जसमध्ये अधिकांश सीमाना सहजताका कारण आफ्नै देशको गाडीमा नेपाल आएका हुन्छन् । भारतीय गाडीमाथि रोक लगाउँदा पर्यटक आगमनमा कमी आउने र त्यसले पोखरेली पर्यटनमा असर पार्ने पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० घोषणा हुन जम्मा ५ दिन छ । भ्रमण वर्ष सफल पार्न सबैभन्दा बढी भारतीय पर्यटक नै आउने ती पर्यटन व्यवसायीको दाबी थियो । तर, भ्रमण वर्ष घोषणा पूर्वसन्ध्यामा पोखरामा भारतीय नम्बर प्लेटका सार्वजनिक सवारी साधनमाथि रोक लगाउँदा त्यसले पोखरेली पर्यटनमा असर पार्ने होटल व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष हरि गैरेले बताए ।
उनले भ्रमण वर्षको मुखमा सरकारले गलत कदम चालेको समीक्षा गरे । पोखरामा भारतसहित अरु देशका गाडीसमेत आउँछन् । तर, ‘भारतीय गाडी’ नै तोक्दा भारतीय पर्यटकलाई नेपाल हेर्ने दृष्टिकोणप्रति फरक आउने गैह्रेको दाबी छ ।
परिषद्ले पोखरा आएका भारतीय गाडीमा भारतीय गाडी पोखरा नल्याउन र पोखरेली गाडीमात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध गर्दै स्टिकरसमेत टाँसेर पठाइरहेको छ । परिषद्को यस कदमविरुद्ध भारतीय मिडियाले समेत लेख्न थालेका छन् । भारतको एक पत्रिका लेख्छ, ‘जिल्ला प्रशासन कास्कीले भारतीय गाडी रोक लगाएको छ । यसबाट नेपाल जाने भारतीय पर्यटकलाई समस्या हुन सक्छ ।’
पर्वत कुस्मा १३ घर भई हाल पोखरा १७ बिरौटामा बस्दै आएकी २६ वर्षीया सरिता पौडेल (सुवेदी) का दुई छोरी छन् । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन् । सरिताको माइतीघर भने स्याङ्जा बाङ्सिङ हो। आफ्नै छोरी चढाएको स्कूल बसले कि’चेर सरिताले दुःखद मृ’त्युवरण गर्नुपरेको छ ।
चालक र परिचालकको असावधानीले उनले ज्या’न गु’माउनुपरेको प्रत्यक्षदर्शीको भनाई छ । सात वर्षकी जेठी छोरी समृद्धिलाई नजिकैको बालोदय स्कूलमा भर्ना गरेकी थिईन् । सधैं झैं मंगलबार पनि सरिताले छोरी समृद्धिलाई स्कुल जानका लागि तयार पारिन् ।
आफूले खाना बनाइन् छोरीहरूलाई पनि खुवाइन् । दुई वर्षीया नाबालिका कान्छी छोरी सँगै बस्ने छिमेकीको जिम्मा लगाएर समृद्धिको हात समाउँदै चोकमा पुगेर बस कुरिन्। पोखरा–१७ बिरौटास्थित बालोदय बोर्डिङ स्कुलको बस सधैंको बिहानीझैं आइपुग्यो । करिब पौने १० बजेको हुँदो हो।कक्षा एकमा पढ्ने छोरीलाई सो स्कुलको ग.१ ख २४९९ नम्बरको बसमा चढाइन् र आफू पनि चढिन्। छोरीले ‘मम्मी बाईबाई’ भनिन्, सरिताले पनि ‘बाई’ फ’र्काइन् र बसबाट ओर्लिन् । तर, वि’डम्बना बस एक छिन पनि रो’किएन। उनी झरी नसक्दै बसले लता¥यो ।
पछाडिको च’क्कामा प’रिन् । घाँटी तलको भागमाथिबाट चक्का गु’ड्यो । तत्काल नजिकैका युवाहरु त्यहाँ पुगे । एउटा प्रहरीको गाडी देखे, तर पा’वरहाउसतर्फ अघि बढेको प्रहरी भ्यान न’रोकिएको स्था’नीय युवाले बताएका छन् । बाटोमा आइरहेको एउटा गाडी रो’केर सरितालाई त’त्काल उ’पचारार्थ फेवा सिटी अस्पताल पठाए ।
त्यहाँबाट पुनः गण्डकी अस्पताल (पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्र’तिष्ठान) रे’फर भयो । हामीहरूले दुः’खद घ’टना भएको थाहा पाएपछि गण्डकी अस्पताल पुग्दा उनको मृ’त्यु भइसकेको रहेछ । श्रीमान् टेकनारायण सुवेदी वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएपछि छोरीहरू पढाउन सरिता चार वर्षअघि पोखरा झ’रेकी हुन् ।
टेकनारायण वैदेशिक रोजगारमा जा’नेआउने गरिरहन्छन् । उनलाई घटनाबारे जानकारी दिइसकिएको र नेपाल फ’र्किंदै छन् । बालोदय स्कुलका संस्थापक दुर्गा पंगेनीले पढाइमा समेत स’मृद्धि जे’हेन्दार विद्यार्थी रहेको जनाए । उनले पी’डित परिवारको लागि विद्यालयले के गर्ने भन्नेबारे छलफल जारी रहेको बताए ।
सोच्दै नसोचेको कारुणिक घ’टनाले परिवारमा बि’चल्ली नि’म्तिएको छ । दुई छोरी ना’बालक छन् । घ’टनापछि पी’डित पक्ष, स्कुल प्रशासन, प्रहरी प्रशासनबीच वडा प्रहरी का’र्यालय बैदाममा राति वार्ता पनि चल्यो ।
‘मम्मी बाईबाई’ भनेर बसबाट ओर्लेकी समृद्धिले एकैछिनमा संसार छो’डिनन् !
आज सूर्यग्रहण लाग्दै : के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन ? कुन राशिलाई कस्ताे प्रभाव ? पुरा विवरण हेर्नुस्